Hery Rajaonarimampianina : « Tsy maintsy tanterahina amin’ny taona ho avy ny fifidianana » -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : « Tsy maintsy tanterahina amin’ny taona ho avy ny fifidianana »
Manoloana ireo resaka mandeha sy niniana novoizina mafy, teo aloha teo, fa hanitatra ny fe-potoam-piasany ny Filoha Hery Rajaonarimampianina, novaliany ampahibemaso nanoloana ny Vondrona Eoropeanina sy ny mpikambana eo anivon’ny governemanta ary ny mpanao gazety omaly, fa tsy maintsy tanterahina sy hotontosaina amin’ny taona 2018 ny fifidianana Filoham-pirenena.
“Tsy maintsy tanterahina amin’iny taona 2018 iny ny fifidianana. Tsy maintsy atao ao anaty adihevitra ihany koa anefa ny fomba hanatanterahana izany”, hoy ny hatrany ny Filohan’ny Repoblika
Anisan’ny mbola voizin’ny sasany mahakasika ny fifidianana mantsy ny datim-pifidianana. Mazava anefa ny an’ny fitondram-panjakana fa efa voasoritra sy voarakitry ny lalàm-panorenana izany. Na izany aza anefa, dia nanamafy ny Filohan’ny Repoblika fa tsy maintsy misy ny dinika mba hisian’ny fifidianana eken’ny rehetra sy mba hisian’ny fitoniana. Tafiditra amin’izany koa ny fandinihina ny lalàm-pifidianana. “Taonan’ny fanamby ho an’ny rehetra ny taona 2018”, hoy hatrany ny Filoham-pirenena
Tsiahivina ihany koa, araka ny nambaran’ny mpitondra tenin’ny governemanta sady minisitry ny Serasera, fa tsy hanaiky ary tsy hilefitra amin’ny fanakorontanana amin’iny taona 2018 iny, izany hoe, mialoha sy mandritra ny fifidianana ny Fitondram-panjakana.
Ankoatra izay, dia nanambara ny Filoha Hery Rajaonarimampianina taorian’ny dinika politika andiany fahenina niarahan’ny Vondrona Eoropeanina sy Madagasikara fa efa miha matotra ny fiaraha-miasan’ny roa tonta. “Fotoana nahafahana nifampidinihina mahakasika indrindra ny fiaraha-miasa eo amin’i Madagasikara sy ny Vondrona Eoropeanina. Misy ny firosoana amin’ireo tetikasa eo amin’ny sehatra maro. Teo ihany koa ny fijerena ny tontolo politika, sosialy ary toekarena, sns”, ho hatrany ny Filohan’ny Repoblika.
Etsy andaniny, voalaza ihany koa fa anisan’ny nodinihina ny mahakasika ny fandriam-pahalemana amin’ny fari-dranomasin’ny Oseana Indianina sy maneran-tany ary ny any Eoropa.
Nambara nandritra izany koa fa miditra amin’ny faha-60 taona ny fiaraha-miasan’i Madagasikara amin’ny Vondrona Eoropeanina amin’iny taona 2018 iny. Noho izay indrindra, nanambara ny Filoha Hery Rajaonarimampianina fa “mitodika amin’ny vahoaka hatrany ny fiaraha-miasan’ny roa tonta”.